Mudug: Beeralayda Camaara oo ku khasaaray dalagyadii ay beerteen horraantii gu’ga - Radio Ergo
Mudug: Beeralayda Camaara oo ku khasaaray dalagyadii ay beerteen horraantii gu’ga
(ERGO) – Nuuro Maxamed Xuseen oo 55 sano jir ah waxaa iyada iyo qoyskeeda ballaaran oo ka kooban shan iyo toban qof ay beer roobaad shan hiktar ah ku leeyihiin meel 4 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Camaara, waxay sida beeralayda kale ee deegaanka wajahaysaa khasaaraha dallagyadii sisinta, qaraha, yaanyada, babayga, digirta, gallayda iyo masaggada ahaa ee ay abuurkooda dhulka gelisay dhammaadkii bishii Maarso ilaa horraantii Abriil, waxayna filaysay in roobka gu’gu uu da’ayo, hase ahaatee uu dib u dhacay roobkii ilaa laba bilood waqtigii la filaayay.
Beertu waxay u ahayd qoyska Nuuro il-dhaqaale oo ay si weyn ugu tiirsan yihiin, waxaana intaan iskuullada la xirin waxbarasho lagaga bixin jiray lix carruurta ka mid ah, laakiin qoyskan filashadoodii xagaaga ayaa xilligan meesha ka baxday. Waxay Raadiyo Ergo u sheegtay in dallagyadan ay ka heli jirtay marka ay si fiican ugu soo go’aan lacag $2.500 ah.
Iminka waxay reerku ku tiirsan yihiin raashin iyo adeegyo dayn ah oo ay bakhaarro ka sii qaataan, maadama odayga reerkuna uusan xilligan shaqayn isagoo xanuunsan awgii. Waxay Nuuro uga warrantay Raadiyo Ergo qaabka xaaladda ay hadda ku jirto u maareeyneyso nolosheeda si ay uga gudubto culeyska soo wajahay.
“Neef aan soo kawaano iyo wax aan dad ka soo baryo iyo hooyaday oo ila joogta wax loo soo tuuro oo ay wax ii celiso, iyo wax saas ah ayaan ku maareeyaa,” ayay tiri.
Dhibaatada ay beeralayada Camaara wajahaayan xagaagan ayaa ah mid aan xilli walba dhici jirin, balse waa mid ay fishaan mar walba oo ay inta dallagyada xilli hore abuuraan uu roobku ka soo daaho oo ku dhowaado waqtiga dabaysha xagaagu jirto.
Xaaladdan ayaa saamaysay 450 qoys oo beero roobaadyo yar-yar oo tan ugu weyni tahay toddobo hiktar oo ku taal aagga magaalada Camaara. Guddoomiyaha guddiga beeralayda Camaara Cabdi Maxamed Cilmi ayaa uga warbixiyay Raadiyo Ergo xaaladdan beeralayda isagoo sheegay iney tahay arrintan mid aanan hore u dhici jirin. Wuxuu intaas ku daray in dalagyadu aysan si wanaagsan ugu soo go’in sannadkii hore oo ayax ka baabi’iyay dallagyada.
“Haddii sanadkaanna ay raacdo kii hore oo ayaxu cunay dadku waa iskaga tagi doonaan,”ayuu yiri guddoomiye Cilmi.
Abshir Cabdi Jiiroow waxaa uu ka mid yahay beeralaydaas, wuxuu Raadiyo Ergo u sheegay in bishan luulyo uu filayay inuu dalagyadii uu beertay Abriil iibgeeyo, haddii uusan khasaaruhu helin.
Wuxuu deegaankan beeralay ku ahaa soddon sano, wuxuuna sheegay in sidan oo kale ay dhacdo ay ku ahayd dhif iyo naadir. Abshir waxaa culayska ugu weyn ku haya waa dayn $1300 oo isugu jira abuurkii beerta, biilka qoyska, waxaa uuna aaminsan yahay halka kaliya ee uu ka bixi karaa in ay tahay abuur kale oo uu beerta dib ugu celiyo si uu uga faa’idaysto roobabka dayrta bisha Sebteembar.
Maamulka deegaanka Camaara ayaa xaaladda beeralayadan u gudbiyay maamulka Galmugud iyo hay’daha samafalka, taas oo keentay in hay’adda WFP ay raashin ay ku noolaadan u qaybisyo 500 oo qoys oo ka mid ah beeralayda iyo dadka kale ee nugul ee beeralayadan ku sii tiirsanaa, sida uu Raadiyo Ergo u sheegay Yusuf Salaad Maxamuud oo ah gudoomiyaha Camaara.
“Maamulkeenu maamul kayd u yaallo maahan waxa kaliya oo aan qaban karo waxa ay tahay inaan gaarsiiyo hay’adaha iyo maamulka naga sarreeya ee Galmudug,” ayuu yiri.
Khubarrada oo ka jawaabaya su’aalaha ayaxa ee dhegeysteyaasha